Waxaan ahay ilmo ama qof weyn oo ka tegey daryeel - Settled
Hadaad daryeel kasoo tagtay, Dawladda Maxalliga ee daryeelka ku siinaysa baa laga yaabaa inay weli mas’uuliyadeeda tahay codsigaaga, ayadoo da’daada ay ku xiran tahay. Ayagay mas’uuliyaddeeda tahay inay aqoonsadaan caruurta xaqa u leh, ayagooy ku jiraan kuwa dawladdu haysatay mas’uuliyadda waalidnimo, kuwa ay lahaayeen heshiis daryeel wadaaga iyo kuwa daryeelka ka baxey. Waxaad ka fiirin karta marka hore halkan Codkii Coram (Coram Voice) qaybta aad ugu habboon xaaladdaada intaadan codsan. Xafiiska Arrimaha Gudaha wuxuu ku weydiin doona seddex shay markaad samaysnayso codsigaaga:
Sheegidda wixii xukun dambi ah.
Xafiiska Arrimaha Gudaha wuxuu soo saaray hagid ku saabsan caddeynta degganaanshaha ay aqbali doonaan.
Hadaad is leedahay waad codsan kartaa adigu, aadna haysatid baasaboor ama kaarkaaga aqoonsiga qaran, waxaad nidaamka codsigaaga ka bilaabi kartaa halkan.
Haddii aadan haysan taleefoonka casriga ah, ama taleefoon leh tiknoolajiyada saxda ah, waxaad dukumiintiyadaada ugu diri kartaa boostada ama waxaad dukumiintiyadaada ku sameyn kartaa xarunta iskaanka. Waa inaad ballan samaysataa, waxaana jiri kara inaad bixisid lacag saad u isticmaashid (caadiyan waa qiyaas dhan £14 codsi kasta).
Haddii ay dhib kugu tahay helitaanka kumbuyuutar si aad u sameyso codsigaaga, adeegga Caawinaadda Internetka ayaa kaa caawin karaa helitaanka kumbuyuutarka, laakiin kaama caawin karo codsigaaga.
Hoosta waxaad ka heli kjartaa lifaaqyada ururuda laga yaabo inay kaa caawin karaan codsigaaga, ama kuu diri kara dad ku caawin kara. ...